IBoko Haram ithumbe amantombazane angu-22 | isiZulu
IBoko Haram ithumbe amantombazane angu-22
IBoko Haram ikhiphe i-video eveza kubulawa abasolwa ngokuba yizimpimpi
Kuminze amasosha ebalekela iBoko Haram
Kano - IBoko Haram ithumbe amantombazane kanye kanye nabesifazane abangu-22 sebebonke ezehlakalweni ezahlukene ngesikhathi egasela enyakatho-mpumalanga yeNigeria, kusho izakhamuzi zitshela i-AFP ngoLwesihlanu.
Esigamekweni sokuqala esenzeke ngoLwesine, iBoko Haram igasele endaweni yasePulka eduzane nomngcele waseCameroon nokuyilapho ithumbe khona amantombazane angu-18.
"Amasosha eBoko Haram aseMamman Nur afike ngamaveni ngezithuba zabo-06:00 ashaqa amantombazana angu-14 aneminyaka engu-17 ubudala nangaphansi ngesikhathi izakhamuzi zibalekela ehlathini,” kusho umholi wasePulka.
"Baphinde bathatha namanye amantombazane amane abebalekela ehlathini elingaphandle kwale ndawo,” kusho umholi womphakathi ongafunanga kudalulwe igama lakhe.
OLUNYE UDABA: Usale ebhajwe kushemula obezogqekeza nabangani
Kwesinye isigameko esenzeke ngaphandle kwaseDumba, eduze naseLake Chad, iBoko Haram ibulale oyedwa ozame ukweqa ngemuva kokwenqaba ukukhokha imali yokuvikelwa, kusho u-Adamu Ahmed, oyilungu labalwisana neBoko Haram.
"Ngesikhathi oshayasibhamu beBoko Haram bezolanda imali, bamthole eseshaye wachitha nakho konke okungokwakhe, base bemjaha,” kusho u-Ahmed.
"Bambambe ngaseDumba nokuyilapho bembulalele khona baphinde badubula nemfuyo.
"Bathathe abesifazane abane emndenini wakhe,” esho.